onlineakhabar.com: रोचक जानकारी : अाखिर महिला र पुरुषको सर्टमा बटन किन अपोजिट साइडमा हुन्छ?
Life Style » रोचक जानकारी : अाखिर महिला र पुरुषको सर्टमा बटन किन अपोजिट साइडमा हुन्छ?
रोचक जानकारी : अाखिर महिला र पुरुषको सर्टमा बटन किन अपोजिट साइडमा हुन्छ?
धेरै कुरा यस्ता हुन्छन् जसलाई हामी खासै ध्यान दिइरहेका हुँदैनौ । एउटा त्यस्तै सानो कुरा जुन हामी खासै ध्यान दिंदैनौ । तपाईले कहिले यो कुरा याद गर्नुभएको छ कि महिलाहरु र पुरुषहरुकव शर्टको बटन फरक फरक साइडमा हुन्छ । खासमा महिलाहरुको शर्टको बटन बाँया तर्फ हुन्छ भने पुरुषहरुको सर्टको बटन दायाँ तर्फ हुन्छ ।
अाखीर किन यस्तो हुन्छ ?
हाम्रो शर्टमा बटन हुनुको पछाडी धेरै कारणहरु छ र पछिल्लो धेरै बर्षदेखिको परम्पराहरुले यस बिषयमा विभिन्न तर्क दिन्छन् । पहिले पहिले पुरुषहरु खुद अाफै कपडा लगाउने गर्दथे भने महिलाहरुलाई अरुले लगाइदिनुपर्ने थियो । जो दोस्रो व्यक्तिलाई लगाइदिंदा दाहिने हात बढी सक्रिय हुन्थ्यो । त्यसै कारण पुरुषको दायँ तर्फ र महिलाको कपडामा बाँया तर्फ बटन हुन्थ्यो ।
त्यस्तै अर्को किबदन्ती अनुसार पहिले पहिले पुरुषको दायाँ हातमा तलबार राख्ने गर्दथे भने महिलाहरु अाफ्नो बाँया हातमा बच्चा राख्दथे । त्यसैकारण सजिलोको लागि यस्तो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिले महिलाहरु र पुरुषको परिधानमा धेरै भिन्नता हुन्थ्यो । तर समय अनुसार महिला र पुरुषहरुलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने भएपछि बिस्तारै महिला र पुरुषको कपडाहरु एउटै हुन थाल्यो । त्यसैकारण महिलाको कपडा र पुरुषको कपडामा थोरै अन्तर देखाउन यस्तो गरिएको हुनसक्छ भन्ने समेत अनुमान लगाउने गरिन्छ ।
त्यस्तै यसै बिषयको कनेक्सन नेपोलियन सँग पनि छ । भनिन्छ कि नेपोलियनले महिलाहरुको कपडामा बायाँ तर्फ बटन लगाउने अादेश दिएका थिए । साथै कपडा निर्माताहरुको धेरै रणनीतिहरुका कारण पनि महिला र पुरुषहरुको कपडामा ठिक बिपरित बटन राख्ने चलन अाएको हुन सक्छ ।